Happy Valentine's Day Quotes in Nepali - Happy Valentines Day 2020 Greetings Quotes Images gift Ideas Wishes Sayings Wallpaper
Saint Valentine’s Day is also known as Feast of Saint Valentine, and It’s celebrated all over the world as the day of love, affection, and romance. Though it is not marked asaholiday and most of the countries, still it isaday full of emotions and love. People decorate their houses, offices, spend it with their family or friends and esp. their partners.
It’sabest and unique day to celebrate and show your deepest feelings to your loved one and show them you genuinely care. Here are some best happy valentine’s day quotes in Nepali to wish your wife, husband, boyfriend or girlfriend.
1 Happy Valentine’s Day quotes for Wife in Nepali
2 Happy Valentine’s Day quotes for Husband in Nepali
3 Happy Valentine’s Day quotes for Boyfriend in Nepali
4 Happy Valentine’s Day quotes for Girlfriend in Nepali
Happy Valentine’s Day quotes for Wife in Nepali
હું પ્રેમ કરવા માટે એક સખત વ્યક્તિ છું પણ જ્યારે હું પ્રેમ કરું છું, ત્યારે હું ખરેખર ખૂબ જ પ્રેમ કરું છું. વેલેનટાઈન્સ દિનની શુભેચ્છા
हामी र म, हामी स्वर्गमा चुम्बन गर्न र सँगसँगै पृथ्वीमा पठाउन सिखाएको छ, यद्यपि हामी जान्दछौं कि हामी के सिकेका छौं के थाहा छ।
मैले तिम्रो साथ बिताएको घण्टाको लागी म सुगन्धित बगैचा, एक दिमाग गोर्खा, र यसको लागि एक फाउन्टेन गीत जस्तो देखिन्छु। तपाईं र तपाईं मात्र मलाई महसुस गर्नुहुन्छ कि म जीवित हुँ। अन्य मानिसहरूले यो भनिएको छ कि स्वर्गदूतहरूले देखेका छन्, तर मैले तपाईंलाई देखेको छु र तपाई पर्याप्त हुनुहुन्छ।
उनले आफ्नो विरुद्ध उनको टाउको आराम गरे र महसूस गरे, पहिलो पटक, तिनी प्राय: उनीसँग कस्तो महसुस गर्थे: आत्महत्या। उहाँले आफैंलाई आफैं जस्तै बनाउनुभयो। उनको साथ, त्यो सजिलो थियो। उनको छाला महसुस भयो जस्तो कि यो उनको सही आकार थियो … यो धेरै प्राकृतिक लग रहेको थियो, अजीब चीजहरु को बारे मा उसलाई कुरा गर्न। त्यो पहिले यो कहिल्यै गरेन। विश्वास, यति अचानक र अझै यति पूर्ण छ, र तीव्रताले उसलाई डरलाग्दो छ … तर अब तिनी सबै कुरा मात्र सोच्न सक्थे जुन उनी अझै पनि भन्न चाहन्थे, उहाँसँग गर्न चाहन्थे।
यो माया गर्न एक शक्तिशाली दुखाइ छ, र ‘दुखाइको दुखाइ दुखाइ छ। तर सबै पीडाहरू, सबैभन्दा ठूलो दुखाइ प्रेम हो, तर व्यर्थमा प्रेम छ। प्रेम दिबसको हार्दिक सुभकामना!
यो प्रेमलाई लामो साथी र दृढतापूर्वक अदालतको आचरण मान्न गलत छ। प्रेम आध्यात्मिक आत्मीयताको सन्तान हो र त्यस क्षणमा एक क्षणमा सिर्जना नभएसम्म यो वर्ष वा यहाँका पुस्ताहरूको लागि सिर्जना गरिने छैन। तपाईलाई शुभ वेलेंटाइन दिन चाहानुहुन्छ!मेरी पत्नीले मलाई बनाएको सबै पैसा पाउँछ। म हरेक बिहान एक स्याउ र सफा कपडा पाउछु। शुभ वेलेंटाइन दिन मेरो माया! म तिमीलाई धेरै माया गर्छु!
Happy Valentine’s Day quotes for Husband in Nepali
परिवारले कहाँ सुरु गर्छ? यो एक जवान मान्छे संग प्रेम मा गिरने देखि शुरू हुन्छ – कुनै बेहतर विकल्प नहीं मिलयो। प्रेम दिबसको हार्दिक सुभकामना!
हामी एक्लै जन्मेको छौं, हामी एक्लै बस्छौं, हामी एक्लै मर्छौ। केवल हाम्रो प्रेम र मित्रताको माध्यमबाट हामी एक्लै छैनौं कि पल को लागि भ्रम सिर्जना गर्न सक्छौं।
तपाईं आफ्नो प्रेमलाई थाहा छ जब तपाईं सबै चाहानुहुन्छ कि व्यक्तिलाई आनन्दित हुने हो, भलेपनि तपाईं उनीहरूको आनन्दको भाग हुनुहुन्न। शुभ वेलेंटाइनको दिन मेरो जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ!
यो संसारको सबैभन्दा राम्रो र सबै भन्दा राम्रो चीजहरू हेर्न वा सुनेका छैनन्, तर हृदयको साथ महसुस गर्नुपर्छ। प्रेम दिबसको हार्दिक सुभकामना!
मैले देखेको छु कि तिमी सिद्ध थिए, र त्यसैले मैले तिमीलाई प्रेम गरे। त्यसपछि मैले देखेँ कि तपाईं सिद्ध थिएनौं र म तिमीलाई पनि प्रेम गर्थें। शुभ वेलेंटाइन दिवस मेरो माया!
Happy Valentine’s Day quotes for Boyfriend in Nepali
तपाईं कुनै पनि थाहा छैन कि कहिलेकाहीँ तपाईलाई कहिलेकाहीँ तपाईको बारेमा सोच्न को लागी बलियो बनाउनु हो। म तिमीलाई धेरै माया गर्छु! शुभ वेलेंटाइन डे!
एक राम्रो प्रेमीको बिरुद्ध एक स्ट्यान्ड अप हास्य जस्तो छ। तपाई आफैले एक शुरुवातलाई कल गर्न सक्नु अघि 10 वर्ष चाहिन्छ। प्रेम दिबसको हार्दिक सुभकामना!
त्यहाँ तपाईंसँग हुन चाहने केवल दुई पटक मात्र छन्। अहिले र सधैंभरि। तिमीलाई माया गर्छु! प्रेम दिबसको हार्दिक सुभकामना!
यदि तपाईं सयौं बाँच्न हुनुहुन्छ भने, म एक सय एक मिनेटमा बाँच्न चाहान्छु, त्यसैले म तपाईंलाई बिना जीवन बिताउँदैन।
Happy Valentine’s Day quotes for Girlfriend in Nepali
बेबे, तपाईंले मलाई सुन्दर, मायालु, सुरक्षित, र हेरचाह गर्नु भएको छ। तपाईं मलाई एक राम्रो व्यक्ति बनाउनुहुन्छ, र म तपाईंको छेउमा बिना मेरो जीवन जिउँदिनँ। मेरा लागि धन्यवाद म तिमीलाई माया गर्छु, धेरै
म तपाईंको आँखाको व्याख्या गर्न सक्छु, र तपाईंको आवाजको आवाज मलाई तितलीहरू दिन्छ। तपाईंको मुस्कुराले कसरी मेरो हृदयलाई हराउँछ र कसरी मेरो साथमा हरेक पटक हुन्छ, मलाई यति पूर्ण लाग्छ
जब म तिमीलाई सम्झछु, मैले पुरानो कुराकानी पढें, मूर्ख जस्तै मुस्कान, गीतहरू सुनेको छु जसले तपाईलाई सम्झाउँछु, त्यसपछि तपाईलाई अधिक सम्झन्छु।
मैले देखेँ कि तपाईं सिद्ध थिए र त्यसैले मैले तिमीलाई प्रेम गरे। त्यसपछि मैले देखेँ कि तपाईं सिद्ध थिएनौं र म तिमीलाई पनि प्रेम गर्थें।
Tags: cute valentines day sayings, happy valentines day in nepali, valentines day couple quotes